रोनाल्डो पोर्चुगलको राष्ट्रिय टोलीबाट नखेल्ने ! - Everest Dainik - News from Nepal
एजेन्सी । पोर्चुगलका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोले राष्ट्रिय टिमले खेल्ने आगामी २ खेल नखेल्ने भएका छन् । उनले क्रोएसिया विरूद्दको मैत्रीपूर्ण खेल र युईएफए नेशन्स लिग अन्तर्गत इटालीविरुद्धको खेल नखेल्ने भएका हुन् ।
आगामी सेप्टेम्बर ७ मा पोर्चुगलले क्रोएसियासँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ भने सेप्टम्बर १० मा इटालीसंग युईएफए नेशन्स लिगमा भिड्दैछ । दुबै खेलका लागि पोर्चुगलले घोषणा गरेको टोलीमा रोनाल्डो परेका छैनन् ।
याे पनि पढ्नुस मेसी र रोनाल्डोको पुस्ता घर फिर्ता होला ?
स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडबाट १०० मिलियन पाउण्डमा यसै सिजन युभेन्ट्स गएका रोनाल्डोले पोर्चुगलको टिमबाट पछिल्ला २० मैत्रीपूर्ण खेलमा ८ मा मात्र खेलेका छन् । गएको महिना रुस विश्वकपमा ह्याट्रिक गरेका रोनाल्डोले पोर्चुगलबाट १ सय ५४ खेल खेल्दै ८५ गोल गरिसकेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस विश्वकप फुटबलः रोनाल्डो के अब १० गोल गर्न सक्लान् ?